UXiaomi sele elungiselela ukumiliselwa kweMi MIX Mini | Iindaba zeGajethi
UXiaomi sele elungiselela ukumiliselwa kweMi MIX Mini
Sele kuyinyanga ukusukela oko uXiaomi wazisa ngokusemthethweni, kwaye wothusa phantse wonke umntu, Mi Mix, i-smartphone enesikrini esikhulu se-6.4-intshi eboniswa ngaphambili ngaphandle kwezakhelo kwaye ihlala ngaphezulu kwe-90% yomphambili wesixhobo. Esi siphelo sinomdla kwaye sinomdla sele sithengisiwe ngempumelelo enkulu kwintengiso, sithengisa zonke izinto ezikhoyo eTshayina kwimizuzwana nje engama-20.
Into esinokuyibiza ngokuba ngumnyhadala wezakhelo okanye endaweni yeefreyimu, isenokungabi saphela kwaye umenzi waseTshayina ubonakala ekulungele ukumisela ngokusesikweni Xiaomi Mi Mix mini, esele yabizwa ngegama "Nano".
Okwangoku esi sixhobo sefowuni sikwazile ukubona kwimifanekiso elihluziweyo, ecaleni komntakwabo omdala, uMxube, nangona umgangatho wemifanekiso ushiya okunqwenelekayo kwaye ungasivumeli ukuba sazi iinkcukacha ezininzi yale Mi Mix mini.
Ngokubhekisele kwiimpawu zayo kunye nokubalulwa, ngokwamahemuhemu singafumana isikrini se-intshi ye-5.5, efanayo kakhulu nale besesiyibonile kwiXiaomi Mi Mix, iprosesa ye-SI-napdragon 821 eya kuthi ixhaswe yi-4GB ye-RAM kunye ne-64GB yokugcina, endaweni ye-6GB ye-RAM kunye ne-128GB yokugcina.
Ngoku kufuneka silinde iXiaomi ukuba ithathe isigqibo sokuveza ngokusesikweni le Mi Mi mini mini, ethi ichithwe ngumenzi wase China nangaliphi na ixesha. Ndingaba nesibindi sokuyitsho ukuba kungekudala izakufumaneka ukuze ithengiswe ngexesha leKrisimesi, apho ngokuqinisekileyo iya kuba sesinye sezipho zeenkwenkwezi.
Ucinga ntoni malunga nokukhetha ukubona iXiaomi Mi Mix mini kwintengiso?.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » UXiaomi sele elungiselela ukumiliselwa kweMi MIX Mini
NgoLwesihlanu omnyama ulungile kwikona kwaye zezinye zezona zinto zintengiso zangaphambili
Umcimbi wexesha ngaphambi kokuba sithi ndlela-ntle kwi-Android 8 kwiziphumo zokukhangela